“အသက်(၄၅)နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမယ့် ဆံပင်တစ်ပင်မှ မဖြူသေးတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကိုပြောပြခဲ့တဲ့ နန္ဒာလှိုင်” - Khit Lunge
“အသက်(၄၅)နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမယ့် ဆံပင်တစ်ပင်မှ မဖြူသေးတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကိုပြောပြခဲ့တဲ့ နန္ဒာလှိုင်”
တစ်ခေတ်တစ်ခါက အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နန္ဒာလှိုင်ကတော့ နုပျိုခြင်းရဲ့လျို့ဝှက်ချက်ကို ဖွင့်ဟခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင်အလှမျိုးပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာကြောင့် မင်းသမီးတွေထဲမှာ အလှဆုံးလို့တောင် မှတ်ချက်ပေးခံခဲ့ရတဲ့အထိ ကျော်ကြားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ အလှမ်းဝေးခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် ယနေ့တိုင် အမာခံပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးခြင်းခံနေရသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မိသားစုကို အချိန်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် အနုပညာအလုပ်ကို စွန့်လွှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Missha အလှကုန်ကို တင်သွင်းဖြန့်ချီနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ဇေဝတီလှိုင်၊ ဇေရတီလှိုင်၊ ဇေမဒီလှိုင်ဆိုတဲ့ သမီးလေးသုံးယောက်ထွန်းကားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး အရင်လိုလှပဲနုပျိုနေဆဲဖြစ်တာကြောင့် အများတကာအားကျနေရသူတစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ လူမှုကွန်ရက်မှာ တနေ့တာအကြောင်းအရာလေးတွေကို ပရိသတ်တွေကို မျှဝေပေးလေ့ရှိတဲ့နန္ဒာလှိုင်ဟာ အသက်(၄၅)နှစ် ရှိပြီဖြစ်ပေမယ့် ဆံပင်တစ်ပင်မှ မဖြူသေးတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သူရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှာတော့ “ကျွန်မအသက်(၄၅) ဆံပင်တစ်ပင်မှမဖြူသေးဘူး။အဲ့ဒါ ဘာကြောင့်လဲ သိလား? အဖြေကို ကွန်မန့်မှာရေးထားမယ်နော်”လို့ရေးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကွန်မန့်ထဲမှာတော့ “ခေါင်းခြောက်စရာဆို ယောက်ျားကိုပေးစဉ်းစားလိုက်တယ်လေ…အဲ့ဒါကြောင့် သူကတစ်ခေါင်းလုံးဖြူပြီး ကိုယ်မဖြူတာ” ဆိုပြီး အရွှန်းဖောက်ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နန္ဒာလှိုင်ရဲ့အဖြေကိုတော့ ပရိသတ်တွေက သဘောကျနှစ်ခြိုက်နေကျတာဖြစ်ပါတယ်။.
Source – Nandar Hlaing,CRD-Rainbow : Cele Gabar
တဈခတျေတဈခါက အောငျမွငျကြျောကွားခဲ့တဲ့ မငျးသမီးခြောတဈယောကျဖွဈတဲ့ နန်ဒာလှိုငျကတော့ နုပြိုခွငျးရဲ့လြို့ဝှကျခကျြကို ဖှငျ့ဟခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ပွဈမြိုးမှဲ့မထငျအလှမြိုးပိုငျဆိုငျခဲ့တာကွောငျ့ မငျးသမီးတှထေဲမှာ အလှဆုံးလို့တောငျ မှတျခကျြပေးခံခဲ့ရတဲ့အထိ ကြျောကွားခဲ့သူလညျးဖွဈပါတယျ။ အိမျထောငျကပြွီးနောကျပိုငျးမှာတော့ အနုပညာအလုပျတှနေဲ့ အလှမျးဝေးခဲ့တာဖွဈပမေယျ့ ယနတေို့ငျ အမာခံပရိသတျတှရေဲ့အားပေးခွငျးခံနရေသူတဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။
မိသားစုကို အခြိနျပေးနိုငျဖို့အတှကျ အနုပညာအလုပျကို စှနျ့လှတျခဲ့တာဖွဈပွီး Missha အလှကုနျကို တငျသှငျးဖွနျ့ခြီနတောလညျးဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာ ဇဝေတီလှိုငျ၊ ဇရေတီလှိုငျ၊ ဇမေဒီလှိုငျဆိုတဲ့ သမီးလေးသုံးယောကျထှနျးကားခဲ့ပွီဖွဈပွီး အရငျလိုလှပဲနုပြိုနဆေဲဖွဈတာကွောငျ့ အမြားတကာအားကနြရေသူတဈယောကျဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ လူမှုကှနျရကျမှာ တနတေ့ာအကွောငျးအရာလေးတှကေို ပရိသတျတှကေို မြှဝပေေးလရှေိ့တဲ့နန်ဒာလှိုငျဟာ အသကျ(၄၅)နှဈ ရှိပွီဖွဈပမေယျ့ ဆံပငျတဈပငျမှ မဖွူသေးတဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြကို ပွောပွခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
သူရဲ့ဖဘှေ့တျချစာမကျြနှာမှာတော့ “ကြှနျမအသကျ(၄၅) ဆံပငျတဈပငျမှမဖွူသေးဘူး။အဲ့ဒါ ဘာကွောငျ့လဲ သိလား? အဖွကေို ကှနျမနျ့မှာရေးထားမယျနျော”လို့ရေးထားခဲ့တာဖွဈပွီး ကှနျမနျ့ထဲမှာတော့ “ခေါငျးခွောကျစရာဆို ယောကျြားကိုပေးစဉျးစားလိုကျတယျလေ…အဲ့ဒါကွောငျ့ သူကတဈခေါငျးလုံးဖွူပွီး ကိုယျမဖွူတာ” ဆိုပွီး အရှနျးဖောကျဖွကွေားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ နန်ဒာလှိုငျရဲ့အဖွကေိုတော့ ပရိသတျတှကေ သဘောကနြှဈခွိုကျနကေတြာဖွဈပါတယျ။.